Maxay yihiin arrimaha ku gedaaman Xudeyda? - BBC News Somali
Maxay yihiin arrimaha ku gedaaman Xudeyda?
Xabbad joojinta ayaa Talaadadii ka bilaabatay Xudeyda
Q M oo shaacisay qorshe lagu kordhinayo gargaarka la gaarsiiyo dadka Yamen
Hoggaamiyaha Xuutiga oo sheegay inuusan Sucuudiga isku dhiibeynin
In ka badan 22 milyan oo bulshada Yemen ah ayaa u baahan gargaar, halka siddeed milyan aysan garaneyn halka ay ka heli doonaan cunto.
Muxuu qaraarka QM leeyahay?
Qaraarka ayaa "ugu baaqaya dowladda dowladda Yemen iyo mucaaradka Xuutiyiinta inay oggolaadaan soo dejinta badeecadaha ganacsiga iyo kuwa gargaarka oo ay ku jiraan shidaalka, iyo inay dhinacyadu hubiyaan in dhammaan dekadaha Yemen ay shaqeeyaan."
Weriyaha BBC-da ee Yemen Nada Tawfik ayaa sheegeysa in QM ay rumeysan tahay in nabad ka dhalata dekaddaasi Badda Cas ay naruuro u tahay malaayiinka qof ee macluusha qarka u saran, isla markaana ay soo afjarto dagaalka sokeeye.
Maxay isku khilaafeen Mareykanka iyo Ingiriiska?
Isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo ee taageeraya dowladda Abdurabbuh Mansour Hadi ayaa fulinayay weerarro cirka ah - waxaana garab siinayay qaar ka mid ah waddamada galbeed oo ay ku jiraan Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska.